WAL-TAANEE WALIIF HAA BIRMANNU. – Kichuu
HomeAfaan OromooWAL-TAANEE WALIIF HAA BIRMANNU.
Akuma beekamu wayyaaneen harmoolii Oromoo Jaartii, dargaggeettii, ijoollee utuu hin jedhin hiraarsuun ajjeesuun itti fufee jira. Haati Oromoo hortee ija ijoolleeseeti ilaaltee utuu hin quufin wayyaaneen kichuu kichuutti jelaa kutaa jirti.
Seenaan aadde Loomii Waaqayyoo ijoollesaani sadii dhuukamssan keessa hagaa ammatt tokko ajjeesanii fidani fi,
Seenaan haadha Arsii bahaa aanaa sirkaarra ijoollee shee sadi walduukka iddoo tokkotti ajjeesan yaadannoo keenya yeroo dhiyooti.
Kan miidiyaatti gad hin baane, kan rasaasan dhahamanii rasaasnille qaamasaani keessa jiru, kan mana hidhaa keessatti hiraarfamani “tourch” ta’anii qamaa hirr’atani Imimmaansaani roobsanimmo meeqa laata…?
Meeqan keenyatummo dhukkubbinsaani nu dhukkubee, gaafasaan gaddan gaddinee, gaafasaan boo’an boonyee, biradhaabbachuufille karaa dhabne laata…?
IDOA ( Ijaarsa Dubartoota Oromoo Addunyaa) DC Muddee (December) 17, 2016 sa’aa 6:00pm irraa egalle “fundraising” qopheessun gargarssa Harmoolii biyyaa ijoolleensaani ajjeefaman bira dhabachuuf kutannoon kaaneerra.
Maarre fi qophii irbaataa seena qabeessa kanarraa hirmaachuuf Oroomoon naannoo DMV hundi akkasumas, nannoon birroollee “ticket ” kana bitachuun aantumma keessan agarsiisuun seenaa haadholii biyyaa keessaa gargaruu kana Irra qooda fudhadha jechuun waamicha kenyaa kabajaa isiniif goona.
Ijooleefis bakki qophayee jira.
Dhuunfaaf $ 30.00
Teessoon, 8525 Fenton st, Silver Spring MD, Veteran place.
Black Friday Shopping at Johannesburg, is it really worth it mara?